Urgicalwa Pendant Manufacturers & Suppliers - China urgicalwa ahụ Pendant Factory
Ihe ndị na-eduga nke ụlọ ọrụ anyị bụ tebụl TS nke na-arụ ọrụ arụmọrụ dị iche iche, TD usoro tebụl na-arụ ọrụ eletriki, usoro DD ọtụtụ enyo, ọtụtụ oriọna na-arụ ọrụ, oriọna ndị na-arụ ọrụ ọkụ, igwe na eletriki, tebụl na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma, akwa gynecological bed bed , pendant ahụike, ICU kpụ ọkụ n'ọnụ na-elekọta unit nkwusioru akwa na ngwaọrụ ọgwụ ndị ọzọ.
TS-D-100 Ugboro abụọ Ọdụdọ Medical Gas Pendant maka O ...
TS-DQ-100 Ugboro abụọ Ogwe aka Ọdụdọ Medical Endoscopic P ...
QF-JX-300 China ICU Medical Iche Bridge Bridge Pendant ...
TD-TS-100 Factory Direct Supply Medical Jikọtara P ...
TS-D-100 Double Gas Electric Gas Pendant maka perationlọ Ọrụ
TS-D-100 na-ezo aka aka ike eletriki eletriki okpukpu abụọ.
Ebube ihe ekike na-ebugharị site na ọkụ eletrik, nke na-agba ọsọ ọsọ, na-enweghị nchebe ma nwee ntụkwasị obi.
Na ime ụlọ na-agbanwegharị okpukpu abụọ, oghere ije dị ukwuu. Ọ ga-enweta ohere ka mma nye onye ọrịa.
Ogologo ogwe aka na-agba gburugburu na oghere gas, a na-ahazi ntọala eletriki dị.
Tinye iyuzucha gas na nitrogen oxide interface, nke nwere ike kwalite na ná Nkụnwụ ọgwụ pendant.
TS-DQ-100 Ugboro abụọ Ogwe Aka Electrical Medical Endoscopic Pendant si Factory
TS-DQ-100 na-ezo aka na ogwe aka nke endoscopic eletriki abụọ. Ọ bụ ihe dị mkpa na ịwa ahụ Laparoscopic. Ọ bụ ọkụ eletrik na-ebugharị ya, ọ dị ezigbo mma na ngwa ngwa. Ọ bụghị naanị na ike ebunye ọkụ eletrik na gas, kamakwa tinye ụfọdụ akụrụngwa ọgwụ. 100% hazie nha, ikuku gas, na ntọala eletriki. Modular imewe, ọ nwere ike kwalite n'ọdịnihu.
TS-Q-100 Ugboro abụọ Ogwe aka Mechnical urgicalwa Ahụ Endoscopic Pendant
TS-Q-100, na-ezo aka na ogwe aka nke endoscopic ọgwụ abụọ. Ọ bụ otu n'ime ọrụ ịwa ahụ dị mkpa n'ịwa ahụ laparoscopic n'oge a. Ọbụghị naanị na enwere ike itinye akụrụngwa ahụike, mana enwere ike ịnye ya na gas. Ugboro abụọ na-agbagharị, ogologo ogwe aka nwere ike ịhazi ya ma nwee ike ịtụgharị ogo 350, na-enye ọtụtụ ohere maka ịgagharị.
TS-100 Ugboro abụọ Ogwe Mechanical Operation Pendant na China
TS-100, ihe nlere a na-ezo aka na ogwe aka nke na-arụ ọrụ abụọ.
Designmepụta ogwe aka abụọ na-eme ka ohere ọrụ nke ahụike dị.
Enwere ike ịhazi ogologo nke ogwe aka na-agbagharị.
Ma igbe ahụ ma akụkụ ahụ aka nwere ike ịtụgharị n'ime ogo 350.
TD-Q-100 Single-Arm Manual Medical Endoscopic Pendant maka Hospitallọ Ọgwụ
TD-Q-100 na-ezo aka na otu ogwe aka nke endoscopic ọgwụ pendant.
Site na usoro kọmpụta na obere oghere, ọ bụ ezigbo ọrụ nọọsụ maka obere ụlọ ọgwụ na ngalaba nlekọta kpụ ọkụ n'ọnụ nke mpaghara mpaghara ahụ nwere.
O nwere ike inye nnyefe eletriki, nnyefe gas na ọrụ nnyefe data, ma tinye akụrụngwa ọgwụ.
TD-100 Single-Arm Mechanical Medical Reiling Pendant for Hospital
TD-100, ihe nlere anya a na-ezo aka na ihe eji aru ogwu.
Nhazi ọkọlọtọ maka ikuku gas bụ 2x O2, 2x VAC, lx AIR.
TD-Q-100 Single Arm Electric Surgical Endoscopic Pendant maka Ọrụ aterlọ ihe nkiri
TD-DQ-100 na-ezo aka na otu ogwe aka eletriki endoscopic pendant. Ihe mkpuchi a nwere ike ịga na ala site na sistemụ eletriki. Ọ na ọtụtụ-eji nke ogwugwo ụlọ, mberede ụlọ, ICU na mgbake ụlọ. O kachasị iji nye nnyefe eletriki, nnyefe gas na ọrụ nnyefe data, ma tinye akụrụngwa ọgwụ.
TD-D-100 Single Electric Surgical Gas Pendant with CE Asambodo
TD-D-100 na-ezo aka na otu ogwe aka ịwa ahụ gas.
Ọ na ọtụtụ-eji na-arụ ọrụ ụlọ na ICU. A na-ebuli ihe eji ebuli ihe ahụ site na moto, nke na - abụghị naanị ọsịsọ ma dịkwa ire, mana ọ dịkwa nchebe ma nwee ntụkwasị obi.
Emepụtara ya maka ọrụ eletriki, data na ọrụ gas niile dị mkpa.